Swarnim (सानो प्रयास ): June 2014
उम्लिएको चुलाको चिया पुछ्दै आमाले सोध्नु भयो, होइन के कुरा गर्दैछन् सपनाका बाबु अनी साथीहरु ? सपनाले उत्तर दीइ खोही के हो के हो सधैंकोएउटै गफ त हुन्छ नि आमा बुवाहरुको संबिधान संबिधान। सुस्केरा हालेर आमाले सास लिनु भयो अनी भन्नु भयो, हुन त मैले के नै जानेकी छु र तरपनि एती बुझिसकेकी आगनिमा बसेर दुई सुर्को चियाको चुस्की लगाउदै १० बर्ष गफ गरे पनि संबिधान बन्दैन। अली ठुलो चिया बनाउने दिउरीलाएदियत सधैं एसरी चिया त पोखिदैनथियो। अनी मैले सोचे अब त नेपाली जनताले के बुझिसके भने, संबिधान भन्दा अरु धेरै कुरा छन जस्लाईहामीले priority दिनु पर्ने भयो। नेतालाई त चिन्ता छैन, लाज छैन, आनन्दले सात्ता बाड्फाड्मा लागेका छन । नेताले त सिङ्दरबारमा कार्यकर्तालाई ओइ चिया भने पुग्यो घरमा बुढी चिया भने पुग्यो; दिउरी पुरानो भयो, सानो भयो भन्ने त थाहा छैन, देश मा संबिधान चहिएको के थाहा पाउलान र कुन्नी?
Posted by smita sharma at 10:29 AM No comments:
तिम्रा बचनले छेडेको घाऊ हराइ गयो तर
मायाका तिखा काडाले छेडेको ठाम दुखेको छ ।।
सहन्छु म घ्रिणाले भरिएका तिम्रा हर प्रहार
खुशी अझै छैनौ भने पिडा माथि पिडा थप्दै जाउ।।
अन्त्य सबैको हुन्छ तर म हासेकै हुनेछु
तिम्रो थाहा छैन, मिल्छ भने खुशी नि खोसेर जाउ ।।
तिम्रो कसम कदापी म आथ्था पनि भन्ने छैन
नखुल्ने त्यो बन्द ढोका कुरेर नि बस्ने छैन।।
भयो पुग्यो पिडा सबै भित्र भित्रै गुम्साइ राख्छु
माग्ने छैन तिम्रो माया, बरु मर्नु परे मरे मर्छु ।।
Posted by smita sharma at 10:28 AM No comments:
Posted by smita sharma at 10:27 AM No comments: